သင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့မြင်ရနိုင်တဲ့ စမတ်ဖုန်း User ၃မျိုးအကြောင်း
19 Feb 2018 . 5:42 PM
ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ စမတ်ဖုန်းအသုံးပြုသူ အတော်များများဟာ ဖုန်းတစ်လုံးကို သုံးရတာ လုံးဝအဆင်မပြေလောက်အောင် လေးလံလာတဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် ပျောက်ဆုံးပျက်စီးသွားတဲ့အခါမှသာ အသစ်ပြောင်းလဲကြတာကို စစ်တမ်းအချို့အရ သိရှိရပါတယ်။ နောက်ထပ် စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကတော့ ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့မြင်ရလေ့ရှိတဲ့ စမတ်ဖုန်းတွေကို မကြာခဏဆိုသလို ပြောင်းလဲအသုံးပြုတတ်တဲ့ User ၃မျိုးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုမကြာခဏ ဖုန်းပြောင်းသုံးတတ်တဲ့ User တွေကို လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာ ၃မျိုးတွေ့ရှိရပြီး သင်ရော ဘယ်လို အမျိုးအစားထဲပါဝင်မလဲဆိုတာ ပါဝင်ဆွေးနွှေးဖို့အတွက် ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။
၁. ဘာမှန်းသေချာမသိပဲ ဂုဏ်တုဂုဏ်ပြိုင်အနေနဲ့အသုံးပြုသူတွေဖြစ်ပါတယ် (40%)
ဒီလို အသုံးပြုသူတွေကိုတော့ Apple နဲ့ Samsung အသုံးပြုသူတွေထဲမှာသိသိသာသာတွေ့မြင်ရမှာပါ။
Apple ID ဆိုတာဘာမှန်းမသိပဲ iPhone X ကိုင်နေတတ်ကြသလို Note Pen ပါလို့ဆိုတာထက် Display ကြီးလို့ Note ဝယ်တာဆိုတဲ့ Samsung User တွေလည်းရှိနေတာကို စိတ်မကောင်းဖွယ်တွေ့ရှိရပါတယ်။
၂. ဖုန်းကြော်ငြာတွေရဲ့လွှမ်းမိုးခြင်းခံရသူများ (30%)
အွန်လိုင်းမှာ တစ်နေ့တခြား မမြင်ချင်လောက်အောင်တွေ့နေရတာကတော့ ဘယ်ဖုန်းက ကင်မရာ ဘယ်လိုကြီးတောင်ကောင်းတာပါ ၊ ဒီဖုန်းနဲ့ ဆယ်ဖီ ဆွဲလိုက်ရင် ဘယ်လိုတွေတောင် လှသွားမှာ ဆိုတဲ့ကြော်ငြာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကြော်ငြာတွေမြင်ရတာနဲ့ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းသော စမတ်ဖုန်းအသုံးပြုသူတွေဟာ ကိုယ့်မှာရှိနေတဲ့ဖုန်း ဘယ်လောက်ကောင်းနေ ကောင်းနေ ဒီဖုန်းမှမရရင် စားမဝင်အိပ်မပျော်တဲ့အတွက် နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ရအောင်ဝယ်ကြပါတော့တယ်။ ဒါနဲ့တင်ပြီးလားဆိုတော့ မပြီးသေးပါဘူး။ နောက်တစ်မျိုးထွက်လာရင် ထပ်ဝယ်ဦးမှာပါ။ကိုယ့်ထဲမှာအဲ့လိုသူငယ်ချင်းတွေရှိရင် စောင့်ကြည့်ပါ။
၃ နည်းပညာအသီးအပွင့်တွေကိုကောင်းမွန်စွာအသုံးချသူများ (30%)
ဖုန်းရဲ့ Specification တွေဟာ လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ Software တွေကို ကောင်းမွန်စွာ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ခြင်းမရှိတော့ပဲ စွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းလာတဲ့အတွက် ၊ ဒါမှမဟုတ် OS Update ထပ်မရနိုင်တော့တဲ့အတွက် ပြောင်းလဲကြပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်ကလည်း ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ နည်းပညာအကြောင်းတွေ သေချာနားလည်သလို ဖုန်းမှာပါဝင်မယ့် Specification တွေကလည်း ဘယ်လောက် ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာ သေသေချာချာကိုသိနေပါတယ်။ ၄င်းတို့ဟာ ဖုန်းကို ကွန်ပျူတာတစ်လုံးလောက်အသုံးဝင်အောင်ကို ခိုင်းတတ်ကြသူများဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလူတွေအတွက်တော့ Apple ပဲကိုင်ကိုင် Samsung ပဲကိုင်ကိုင် သာသာယာယာာပါပဲ။ ဘာဖုန်းကိုင်ကိုင် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်ပြီး အကောင်းဆုံးအသုံးချမယ့်သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ သင်ရော အပေါ်မှာ ဖော်ပြတဲ့ အမျိုးအစားတွေထဲမှာ အမှတ်စဉ် ဘယ်လောက်မှာပါဝင်နေလဲ ? သင့်သူငယ်ချင်းတွေကရော ဘယ်လို အမှတ်စဉ်တွေမှာ အများဆုံးပါနေတာတွေ့ရလဲ ? Comment မှာ အဖြေလေးပေးခဲ့နိုင်ပါတယ်။
ပုံမှနျအားဖွငျ့တော့ စမတျဖုနျးအသုံးပွုသူ အတျောမြားမြားဟာ ဖုနျးတဈလုံးကို သုံးရတာ လုံးဝအဆငျမပွလေောကျအောငျ လေးလံလာတဲ့အခါ ဒါမှမဟုတျ ပြောကျဆုံးပကျြစီးသှားတဲ့အခါမှသာ အသဈပွောငျးလဲကွတာကို စဈတမျးအခြို့အရ သိရှိရပါတယျ။ နောကျထပျ စိတျဝငျစားဖို့ကောငျးတာကတော့ ကြှနျတျောတို့ပတျဝနျးကငျြမှာတှမွေ့ငျရလရှေိ့တဲ့ စမတျဖုနျးတှကေို မကွာခဏဆိုသလို ပွောငျးလဲအသုံးပွုတတျတဲ့ User ၃မြိုးအကွောငျးပဲဖွဈပါတယျ။
ဒီလိုမကွာခဏ ဖုနျးပွောငျးသုံးတတျတဲ့ User တှကေို လလေ့ာကွညျ့တဲ့အခါမှာ ၃မြိုးတှရှေိ့ရပွီး သငျရော ဘယျလို အမြိုးအစားထဲပါဝငျမလဲဆိုတာ ပါဝငျဆှေးနှေးဖို့အတှကျ ဖိတျချေါလိုကျပါတယျ။
၁. ဘာမှနျးသခြောမသိပဲ ဂုဏျတုဂုဏျပွိုငျအနနေဲ့အသုံးပွုသူတှဖွေဈပါတယျ (40%)
ဒီလို အသုံးပွုသူတှကေိုတော့ Apple နဲ့ Samsung အသုံးပွုသူတှထေဲမှာသိသိသာသာတှမွေ့ငျရမှာပါ။
Apple ID ဆိုတာဘာမှနျးမသိပဲ iPhone X ကိုငျနတေတျကွသလို Note Pen ပါလို့ဆိုတာထကျ Display ကွီးလို့ Note ဝယျတာဆိုတဲ့ Samsung User တှလေညျးရှိနတောကို စိတျမကောငျးဖှယျတှရှေိ့ရပါတယျ။
၂. ဖုနျးကွျောငွာတှရေဲ့လှမျးမိုးခွငျးခံရသူမြား (30%)
အှနျလိုငျးမှာ တဈနတေ့ခွား မမွငျခငျြလောကျအောငျတှနေ့ရေတာကတော့ ဘယျဖုနျးက ကငျမရာ ဘယျလိုကွီးတောငျကောငျးတာပါ ၊ ဒီဖုနျးနဲ့ ဆယျဖီ ဆှဲလိုကျရငျ ဘယျလိုတှတေောငျ လှသှားမှာ ဆိုတဲ့ကွျောငွာတှပေဲဖွဈပါတယျ။ ဒီကွျောငွာတှမွေငျရတာနဲ့ ၃၀ ရာခိုငျနှုနျးသော စမတျဖုနျးအသုံးပွုသူတှဟော ကိုယျ့မှာရှိနတေဲ့ဖုနျး ဘယျလောကျကောငျးနေ ကောငျးနေ ဒီဖုနျးမှမရရငျ စားမဝငျအိပျမပြျောတဲ့အတှကျ နညျးအမြိုးမြိုးနဲ့ ရအောငျဝယျကွပါတော့တယျ။ ဒါနဲ့တငျပွီးလားဆိုတော့ မပွီးသေးပါဘူး။ နောကျတဈမြိုးထှကျလာရငျ ထပျဝယျဦးမှာပါ။ကိုယျ့ထဲမှာအဲ့လိုသူငယျခငျြးတှရှေိရငျ စောငျ့ကွညျ့ပါ။
၃ နညျးပညာအသီးအပှငျ့တှကေိုကောငျးမှနျစှာအသုံးခသြူမြား (30%)
ဖုနျးရဲ့ Specification တှဟော လကျရှိအသုံးပွုနတေဲ့ Software တှကေို ကောငျးမှနျစှာ ထောကျပံ့ပေးနိုငျခွငျးမရှိတော့ပဲ စှမျးဆောငျရညျကဆြငျးလာတဲ့အတှကျ ၊ ဒါမှမဟုတျ OS Update ထပျမရနိုငျတော့တဲ့အတှကျ ပွောငျးလဲကွပါတယျ။ ကိုယျတိုငျကလညျး ဖုနျးနဲ့ပတျသကျတဲ့ နညျးပညာအကွောငျးတှေ သခြောနားလညျသလို ဖုနျးမှာပါဝငျမယျ့ Specification တှကေလညျး ဘယျလောကျ ကောငျးကောငျးအလုပျလုပျနိုငျတယျဆိုတာ သသေခြောခာကြိုသိနပေါတယျ။ ၎င်းငျးတို့ဟာ ဖုနျးကို ကှနျပြူတာတဈလုံးလောကျအသုံးဝငျအောငျကို ခိုငျးတတျကွသူမြားဖွဈပါတယျ။ ဒီလူတှအေတှကျတော့ Apple ပဲကိုငျကိုငျ Samsung ပဲကိုငျကိုငျ သာသာယာယာာပါပဲ။ ဘာဖုနျးကိုငျကိုငျ အကောငျးဆုံးရှေးခယျြပွီး အကောငျးဆုံးအသုံးခမြယျ့သူတှပေဲဖွဈပါတယျ။
ကဲ သငျရော အပျေါမှာ ဖျောပွတဲ့ အမြိုးအစားတှထေဲမှာ အမှတျစဉျ ဘယျလောကျမှာပါဝငျနလေဲ ? သငျ့သူငယျခငျြးတှကေရော ဘယျလို အမှတျစဉျတှမှော အမြားဆုံးပါနတောတှရေ့လဲ ? Comment မှာ အဖွလေေးပေးခဲ့နိုငျပါတယျ။